Istaraatijiyadaha Xayeysiinta Moobilka ee guuleysta iyo Kicinta | Martech Zone
Istaraatijiyadaha Xayeysiinta Moobilka ee guuleysta
Jimcaha, Sebtember 12, 2014 Isniin, Oktoobar 12, 2015 Douglas Karr
Celceliska xayeysiiska moobiilka ee lagu gaarayo 1,000 isticmaaleyaasha iPhone waa $ 2.85… ma ahan CPM xun marka kuwa kale ee dhexdhexaadiyeyaasha ah ay ku dhuftaan tiro intaas ka badan. Ma aha in la xuso in dadka isticmaala moobiilku ay inta badan wax iibsanayaan oo ay diyaar u yihiin inay wax iibsadaan. Laakiin xayeesiinta mobile muuqaalku waa mid ballaadhan oo aad u jahwareersan. Waxaa jira daraasiin ah xayeysiisyada moobiilka ee xayeysiinta ah iyo boqolaal dariiq oo aad ku gaari karto isticmaale mobiil - laga bilaabo xayeysiisyada, xayeysiisyada bulshada, emaylka iyo wixii intaa ka badan. Isku soo wada duub istaraatijiyad xayeysiis mobile waxay ubaahantahay xoogaa shaqo laakiin waxay kasban kartaa natiijooyin aan caadi aheyn.
Waad ku mahadsan tahay suuqa sii kordhaya ee moobiilka iyo baahida loo qabo dhaxalka ee naqshadeynta jawaabta, ku habboonaynta xayeysiintaada bartilmaameedkaaga ayaa ka fudud sidii hore, maxaa yeelay dadka isticmaala waxay leeyihiin khibrad isku mid ah waxyaabahaaga haddii ay ku jiraan taleefankooda, kiniinkooda, ama PC-ga. Dhaqdhaqaaqyada sida maalin-ka-shaqaynta ayaa kuu oggolaanaysa inaad sii nadiifiso xayeysiiskaaga moobiilka si aad u gaarto dadka saxda ah, waqtiga saxda ah, iyo goobta saxda ah. Fahamka muhiimadda ay leedahay xayeysiinta moobiilka, iyo sidoo kale barnaamijyadeeda wax ku oolka ah, ayaa ku siin kara adiga hab awood badan oo la awoodi karo si aad ula xiriirto oo aad u taabatid dhagaystayaashaada si aan horay loo arag.
Hal fure tan faahfaahin ku saabsan Whoishostingthis.com taasi waa wax aad u cusbooneysiin ah oo ah inay diirada saaraan wadada uu adeegsado mobiilku - laga bilaabo xayeysiiska illaa u beddelashada - si loo hubiyo in dhammaan waddada loogu beddelayo loo rogay waayo-aragnimo moobiil. Faahfaahin dheeri ah!
Tags: indhoolayaasha shabakadaha xayeysiiskabuuqmaalin kala tagmaalin socoddmggeotarginggacmougaarsiinmobixayeysiiska iphonleedhkashabakadaha xayeysiiska mobilada maxaliga ahxayeysiiska moobaylkanetwork ad mobileshabakadaha xayeysiiska moobaylkawicitaan taleefanka xayeysiiska ahxayeysiiska mobiladaxayeesiinta mobileiskaashatada mobiladaballanta mobilkaxayeysiis banner mobiletartanka mobiladamobilada cpaqayb maalmeedka wareegaemaylka gacantawarsidaha emaylka gacantafoomamka wareegagps guurguuramarketing mobilemobilka wareegahagaajinta mobiladadiiwaangelinta moobiilkanaqshadeynta websaydhka jawaabta lehshaashadda moobiilka xayeysiiska ka buuxoxayeysiiska raadinta moobiilkamobile wareegamuuqaalka moobiilkacimilada wareegamobiletheorymoppartnerNaqshadeynta websaydhka moobiilkapremium shabakadaha ad mobilegoobaha jawaabtakalikafaalaqaadmataanhayaaxadbogagga hurdiga ahyocYP
Faa'iidooyinka Suuqgeynta iyo Iibinta Iskuduwaha Suuqgeynta
Xogta kaa caawin doonta inaad hesho Instagram badan oo jecel iyo raac